သတင်း - ပြုပြင်ထားသော ကားအနားကွပ်များနှင့် အချက်အချာကျသော ဂက်စ်များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
1. မူလဘီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ထားတဲ့ဘီးပဲဖြစ်ဖြစ် ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘီးနဲ့တာယာက ကားရဲ့အကာအရံနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ဤနေရာတွင် ယှဉ်တွဲခြင်းဆိုသည်မှာ ကား၏အကာအရံအပေါ်အခြေခံ၍ ဘီးဗဟိုချက် အနည်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။အကာအရံအတွက်၊ ဘီးဗဟိုချက်သည် အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်တွင် ကြီးမားသောကြောင့် ကား၏ အလုံးစုံပေါင်းစပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
2. စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ယာဉ်၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယာဉ်၏ ထောင့်ကွေ့မှု တိုးတက်မှုအပေါ် အလေးပေးပါသည်။အမှန်မှာ၊ coaxial ခြေရာခံအား တိုးလာခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကား၏ အရှိန်အဟုန်မြင့်မှုနှင့် ထောင့်လမ်းကြောင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ထို့အပြင်၊ ယာဉ်မောင်းအတွက်၊ ကား၏ဘီးများနှင့် တာယာများ၏ အနေအထားသည် ပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
3. အတင်းအကြပ်၊ ပိုကျယ်သောဘီးအချက်အချာကြောင့်၊ et တန်ဖိုးကို တိကျစွာ မတွက်ချက်နိုင်ခဲ့ပါ။ကားပေါ်တွင် ဘီးအချက်အချာကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် အတွင်းတာယာသည် အတွင်းလိုင်းကို ပွတ်တိုက်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် spacers များထည့်ကာ hub ကို အပြင်သို့ ရွှေ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။အတွင်းကလိုင်နာကို မပွတ်မိစေရန် အနည်းငယ် ချဲ့ပါ။ကြီးမားလွန်းသော ဘရိတ်များကို အစားထိုးခြင်းကြောင့် ဘီးဗဟိုနှင့် ကြီးမားသော ကာလီပါကြားတွင် နေရာမလုံလောက်သောကြောင့် ဘီးဗဟိုကို အပြင်သို့ အနည်းငယ်ပိုချဲ့ထားရမည်ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ ကားဒီဇိုင်းရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း၊ ဒီလိုအပိုဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသလို အန္တရာယ်လည်းများပါတယ်။
gaskets သို့မဟုတ် flanges များထည့်ပြီးနောက်ကားအတွက်ဘာအန္တရာယ်များလဲ။
1. သက်တောင့်သက်သာ ဆုံးရှုံးခြင်း။gaskets သို့မဟုတ် flanges များထည့်ပြီးနောက်၊ ကား၏နေ့စဉ်မောင်းနှင်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် လမ်းအခြေအနေဆိုးများတွင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။အချို့သော အထူးအခြေအနေများတွင်၊ ၎င်းသည် ကား၏ semi-axle ၏ universal joint ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
2. ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ခါခြင်းသည်လည်း အကြောင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်သည်။အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ဂတ်စ်များ သို့မဟုတ် အနားကွပ်များထပ်ထည့်ခြင်းသည် ကားမောင်းနှင်နေချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အနည်းငယ်လှုပ်ခါစေသော်လည်း ဤအခြေအနေမှာ ရှားပါသည်။
3. တာယာဝတ်ခြင်း။ခြေရာခံကို မြှင့်တင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် မပေါက်နိုင်သော ဒြပ်ထုကိုလည်း တိုးလာစေပြီး တိမ်းစောင်းမှုထောင့်ကိုလည်း အနည်းငယ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။တာယာ၏အတွင်းဘက်နံရံ မညီမညာဖြစ်မှုနှင့် တာယာ၏အတွင်းနံရံများ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကဲ့သို့သော တာယာဝတ်ဆင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုအချို့ရှိနိုင်သည်။ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေက မမြင့်မားပါဘူး။
4. ဘရိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။gaskets သို့မဟုတ် flanges များထည့်ပြီးနောက် ကား၏ဘရိတ်များသည် ယခင်ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည်ကို စီးနင်းသူအနည်းစုက တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။ဤအခြေအနေတွင်၊ တိမ်းစောင်းမှုအများစုသည် တာယာဆင်းသက်သည့်နေရာကို လျော့နည်းသွားစေပြီး ဘရိတ်အုပ်ခြင်းသည် ယခင်ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါ။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အချို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးပြီးနောက် အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု အမြဲခံစားရသော စီးနင်းသူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။
5. ဆိုင်းထိန်းစနစ် အပြောင်းအလဲ၊ ဘီးအခြေ တိုးလာခြင်း၊ ထုထည် မပြန့်ပွားခြင်း နှင့် ယိုင်လဲမှု အချို့ အပြောင်းအလဲများ စသည်တို့ကြောင့်၊ အချို့သော နိုင်ငံခြား ပြုပြင်မွမ်းမံရေး အေဂျင်စီများသည် အချက်အချာကျသော ဂက်စ်ကတ် သို့မဟုတ် အကာအရံများ ပေါင်းထည့်ပြီးနောက် ကားကို ကုမ္ပဏီ၏ ဆိုင်းထိန်းစနစ် တစ်ခုလုံးကို ပစ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ကား၏ အကောင်းဆုံးအခြေအနေရရှိရန် ပြန်လည်ချိန်ညှိထားသည်။